Best iPhone File Transfer si ay u gudbiyaan Faylal ay si / ka iPhone
> Resource > iPhone > Best Desktop iPhone Transfer File for Windows / Mac
"Ma jiraan wax file iPhone qalab kala iibsiga xirfadeed? Lugood waa wanaagsan yahay, laakiin waxaa music, videos, iyo sawiro kuma wareejin karaan ka iPhone in Lugood. Kaliya waxaan u baahan qalab in hawlaha sida Lugood iyo ha igu files ka iPhone wareejiyo computer ama Lugood. walba oo soo jeedinaya waa laga qiimeeyaa. Thanks! "
Haddii aad iPhone ah fancier tahay, waxa aad u lagama maarmaan u ah in aad leedahay app ah kala iibsiga file iPhone. Iyadoo suuqa kala iibsiga file iPhone ah, kuu soo gudbin doonaa files dhexeeya iPhone iyo computer si fudud tan iyo Lugood files kuma wareejin karaan ka iPhone in computer. Haddii aadan hubin file iPhone kala iibsiga si ay u isticmaalaan, waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo jeedinaynaa inaad isku daydo Wondershare TunesGo Retro . Waxaa loogu talagalay Apple macruufka dadka isticmaala aaladaha si ay u gudbiyaan files. Oo wuxuu Falaa Lugood aan karin iyo.
Hel version tijaabo ah TunesGo Retro si ay u gudbiyaan files iPhone!
Wondershare TunesGo Retro ayaa kala soocay version Windows iyo version Mac . Labaduba waxaa laga heli karaa hadda. In kastoo muuqaalada in version Windows waa wax yar oo kala duwan, kuwaas oo ku version Mac, ay labada fiican in wareejinta faylasha iPhone.
iPhone File Transfer Software - Wondershare TunesGo Retro Key Maqaallo:
Bedelka Music iyo videos ka computer si iPhone, oo ay ku jiraan heeso ku jira iPhone qaab leheyn. Inta lagu guda jiro habka wareejinta, taas iPhone software kala iibsiga file idin xusuusin doonaa jeestay iPhone files leheyn in iPhone qaabab saaxiibtinimo.
Share on music mid computer la iPhone badan. Si ka duwan Lugood in kaliya kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso music aad iPhone, marka files si iPhone kale wareejinta, waxa masixi doono files. iPhone app kala iibsiga file kuu ogolaanaysaa inaad ka mid computer la iPhone kale, iPad, iPod iyo xitaa wadaagaan music.
Bedelka music iPhone in Lugood Library kombiyuutarka si aad Lugood Library mid dhamaystiran. Habkaani waa si gaar ah faa'iido markii qaar ka mid ah heesaha aad goolka u iPhone ma aha in Lugood Library ama aad badiyay asalka Lugood Library oo aad rabto inaad u-dhiska.
Bedelka songs soo xulay, videos, iyo sawiro in computer. Sida iibsiga file iPhone ah, waa in aad ku wareejiso files warbaahinta ka iPhone in computer u gurmad ama isticmaalka dheeraad ah. TunesGo Retro waa nooc ka mid ah qalab sida. Heeso soo xulay, videos, iyo sawiro loo gudbin karaa computer in Dufcaddii.
Sida aan kor ku soo sheegnay in version Windows waa wax yar oo kala duwan ka version Mac ah. Ka sokow sifooyinka soo sheegnay, Wondershare TunesGo Retro (Windows) sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad sidoo playlists ka iPhone wareejiyo Lugood iyo computer, playlist ka Lugood si iPhone. Intaa waxaa dheer, version Windows sidoo kale taageertaa fariin dhoofinta qoraalka, MMS, iMessages la xirnaantooda, iyo xiriirada. In kastoo hadda Wondershare TunesGo Retro (Mac) oo kaliya taageeraa music, video, iyo kala iibsiga sawirka, waxaa kuu ogolaanaysaa inaad maamuli music, video, iyo sawiro iyo sidoo. Raadi muuqaalada sii wanaagsan keligaa.
Waa maxay sababta isku day in aadan kala iibsiga xirfad file iPhone - TunesGo Retro hadda!